5 CM Punk WWE mifanaraka amin'ny famerenana - Wwe
Lalao CM Punk WWE mila ilainao hamerina
7 taona taorian'ny fisehoany farany WWE tao amin'ny Royal Rumble 2014, CM Punk dia niverina tamin'ny tolona matihanina nandritry ny 21 aogositra 2021, fizarana AEW Rampage. Nofaranany ny promo am-pientanam-po teo anoloan'ny vahoaka nahaterahany tamin'ny alàlan'ny fananganana lalao niaraka tamin'i Darby Allin tao amin'ny All Out 2021.
Na dia tsy nanjary be mpitia toy ny The Rock na John Cena aza izy, ny Punk iconoclastic dia azo lazaina fa nifandray bebe kokoa tamin'ireo mpankafy WWE henjana noho ny mpiady rehetra hatramin'ny vanim-potoana Attitude. Ny fiverenany dia nankasitrahan'io ampahan'ny mpijery izay nanaraka tamim-pahadodonana ny hetsika rehetra nanomboka tamin'ny 2014.
Fotoana clobberin 'izao @CMPunk #AEWRampage pic.twitter.com/QMaDo1mAJr
- Ny Ady Elite rehetra amin'ny TNT (@AEWonTNT) 21 aogositra 2021
Miaraka amin'ny lalao AEW efa nandrasana hatry ny ela an'i Punk teo akaiky teo, ireto misy 5 amin'ireo lalao WWE hataony mba hahatonga ny filanao hanina.
5) CM Punk vs Brock Lesnar WWE Summerslam 2013
Ho an'ny ampahany amin'ny hazakazaka 434 andro nihazakazahany ho Tompondakan'i WWE, CM Punk dia nasian'i Paul Heyman, fantatra ihany koa ho mpitantana efa ela an'i Brock Lesnar. Heyman dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fiakarana voalohany an'i Punk tamin'ny lisitra lehibe ary mpinamana akaiky izy roa lahy tamin'ny tena fiainana.
Punk sy Heyman dia nahay nifampiraharaha ary nivadika ho hetsika mahafinaritra indrindra tamin'ny Alatsinainy alina Raw. Na izany aza, nanomboka nihena ny fifanenjanana teo amin'izy roa lahy taorian'ny niverenan'ny 'The Second City Saint' tamin'ny fahitalavitra taorian'ny fahareseny an'i The Undertaker tao WrestleMania 29.
Ny fisarahana taty aoriana dia niafara tamin'ny lalao tsy fahazoana disqualification teo amin'i Punk sy Lesnar tany Summerslam niaraka tamin'i Heyman teo an-joron'ilay Tompondakan'ny Mavesatra UFC teo aloha.
Ny fifandonana dia natomboka tamin'i Lesnar tamin'ny fampiasana ny habeny sy ny atletisma mba hibahan-toerana amin'ny fizotrany alohan'ny hametahan'i Punk an'i Cody azy ho fandresena. Na izany aza, nokasihin'i Heyman ilay teratany Chicago tamin'ny farany, izay nanelingelina an'i Punk ela loatra mba hampiasan'i Lesnar seza vy hahazoana ny fandresena.
20 Tsy misy toro-hevitra miaina tsotra Bullsh * t izay azo ampiharina sy miasa!
Antony nahatonga an'i Brock Lesnar napetraka tao amin'ny ekipa tag miaraka amin'i Shelton Benjamin
25 Antony mahatonga anao tsy faly amin'ny fotoana rehetra
WWE Rivalry rewind: fotoana 5 lehibe indrindra avy amin'ny John Cena Vs AJ Styles.
'Tsy hiara-hiasa amin'izy ireo aho' - Steve Austin dia natahotra ny hanohitra Tompondakan'ny WWE roa teo aloha
Iza no nanambady an'i Khloe Kardashian? Nipoaka ny Twitter taorian'ny nanalokalofan'ny Tristan Thompson ny zavatra niainan'i Lamar Odom efa ho faty
Ny antsipiriany momba ny fihetsika ratsy nataon'ny Undertaker taorian'ny kintana 6ft 10in dia nanao hetsika atletisma
'Ny namanao akaiky indrindra dia nanandrana namono anao!': Namaly tehaka an'i Jeff Wittek i Ethan Klein noho ny heviny momba ny Frenemies
Zavatra 15 Tsy tokony enjehinao amin'ny fiainana
Vince McMahon 'nanapa-kevitra ny hanohitra ny tompon-daka teo aloha rehefa nijery ny lalaony tato anatin'ny herinandro vitsivitsy - tatitra
Antony 8 Mahatsapa ho toy ny tsy misy anao na aiza na aiza
5 WWE Superstars izay efa nanao fihetsika am-peo
nxt fakana karatra york vaovao
maninona aho no manimba tena
ny fomba hahasitrana amin'ny fotoana mahamenatra
inona no hatao amin'ireo namana sandoka
zavatra tokony hatao raha tsy manana namana ianao
ohatrinona ny vidin'ny addison rae net